ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကျန်းမာတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အချက် ၈ ချက် – Gentleman Magazine
သင် ဒီစာခေါင်းစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ သင်ယုံကြည်လို့ပါ။ ယုံကြည်ချက်ဟာ ဘဝကို တကယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်က စလုပ်ရမှာလဲ။
ဘဝမှာ အောင်မြင်ဖို့လမ်းဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ အောင်မြင်ဖို့လမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေဟာ အောင်မြင်မှုရဲ့ အခြေခံပါပဲ။ အသစ်အသစ်တွေကို ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ မေးမြန်းလေ့လာပါ။ အိပ်ချိန်မှန်ပါစေ။ စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့ အချိန်သတ်သတ်ပေးထားပါ။ အဲဒါတွေက ဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက် အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ တခြား သ်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို အောင်မှာ ရေးပြထားပါတယ်။
၁. အမှိုက် ရှင်းပါ
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတာဟာ စိတ်ရှင်းစေပါတယ်။ စိတ်ရှင်းရင် ပိုပြီး ကောင်းကောင်းတွေးခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခု ဝယ်လိုက်တိုင်း အဟောင်းကို လှူပစ် ရောင်းပစ်၊ မရရင် လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။
မိနစ်၂၀ လောက် အချိန်ယူပြီး အစီအစဉ်ချလိုက်တာဟာ ၂ နာရီစာအလုပ် သက်သာစေပါတယ်။ သင်နဲ့အဆင်ပြေမယ့် ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယားဆွဲပါ။ ၈နာရီစာ အလုပ်ချိန်အတွက် လုပ်စရာ ၈ ခု အစီအစဉ်ချသင့်ပါတယ်။ ငွေရှာဖို့အတွက် ၆ ခု ကိုယ်ပိုင်အချိန် ၂ ခု ပါပါစေ။
၃. “ဘူး” တစ်လုံးဆောင်ပါ
အငြင်းစကားဟာ သင့်အတွက် ဘဝပျော်ရွှင်ရေးနဲ့ အလုပ်အတွက် လျှို့ဝှက်လက်နက်ပါပဲ။ အားမနာတတ်ပါနဲ့။ အောင်မြင်တဲ့သူတွေနဲ့ အရမ်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေ ကွာခြားချက်က ဒုတိယ အမျိုးအစားက “ဘူး” တစ်လုံး ဆောင်တတ်တာပါပဲ။
၄. ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြပါ
ဘဝမှာ အောင်မြင်တဲ့သူတွေက ကျေးဇူးတင်တတ်ကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာတိုလေးတွေ၊ ဖုန်းဆက်ပြောတာတွေ၊ အဲ့လို သေးသေးမွှားမွှားလေးတွေက သင့်ကို သာမန်လူတွေထဲကနေ ကွဲထွက်နေစေနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်က ဖုန်းဘေလ် နည်းနည်း၊ ပြန်ရတာက အတိုင်းအဆမရှိပါ။
၅. သင့်ဖုန်းကို အိပ်ရာထဖို့ နှိုးစက်အနေနဲ့ မသုံးပါနဲ့
ဖုန်းသုံးတဲ့သူ တော်တော်များများဟာ ဖုန်းကို ဘေးမှာထားပြီး အိပ်တတ်ကြပါတယ်။ ညဘက်မှာ ဖုန်းသုံးတာဟာ အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲစေပါတယ်။ ပြီးတော့ Facebook Noti တွေ Viber Msg tone တွေကလဲ အိပ်ပျော်နေရာက လန့်နိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းကို ဝေးဝေးမှာထားပြီးတော့ နှိုးစက်နာရီ ကောင်းကောင်းတစ်လုံး ဝယ်ထားပါ။
၆. လူတိုင်းနဲ့ သဘောမတူပါနဲ့
ဘဝမှာ ဘက်တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပါ။ လူတိုင်းနဲ့ သဘောမတူပါနဲ့။ ကိုယ့် အတွေးအမြင်ကို ကိုယ်ကာကွယ်ပါ။ အတွေးအမြင်တစ်ခုရှိတဲ့အတွက် သင့်ကိုလူတွေက လေးစားကြပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်တော့မှ လှေနံ နှစ်ဖက် မနင်းပါနဲ့။
၇. မအိပ်ပဲ မနေပါနဲ့
လူတော်တော်များများဟာ အိပ်ရေးမဝတတ်ကြပါဘူး။ အိပ်ရေးမဝရင် ဦးနှောက်က ရာနှုန်းပြည့် အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဦးနှောက်ရာနှုန်းပြည့်အလုပ်မလုပ်ရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာ ခက်ခဲစေခြင်း၊ စိတ်ဆတ်ခြင်း တို့အပြင် ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်တစ်ခုကို သီးသန့်သတ်မှတ်ပြီးတော့ ညတိုင်း အိပ်ရေးဝအောင် ကြိုးစားပါ။
၈. အတိတ်မှာ ရပ်မနေပါနဲ့
အတိတ်မှာ ရပ်နေမိဖို့ဆိုတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ဖြစ်သင့်ခဲ့တာ.. လုပ်သင့်ခဲ့တာ.. လုပ်နိုင်ခဲ့တာ.. တွေကို ပြန်မစဉ်းစားပါနဲ့တော့။ သင့်အတိတ်ကို မပြောင်းလဲနိုင်ပေမယ့် အနာဂါတ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း သောမတ်ဂျက်ဖာဆင်က “အနာဂါတ်ကို အိပ်မက်ရတာကို အတိတ်သမိုင်းထက် ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်” လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပြျောရှငျအောငျမွငျကနျြးမာတဲ့ဘဝကို ပိုငျဆိုငျဖို့ အခကျြ ၈ ခကျြ
သငျ ဒီစာခေါငျးစဉျကို စိတျဝငျစားတယျဆိုရငျ သငျ့ဘဝကို ပွောငျးလဲနိုငျမယျလို့ သငျယုံကွညျလို့ပါ။ ယုံကွညျခကျြဟာ ဘဝကို တကယျပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျက စလုပျရမှာလဲ။
ဘဝမှာ အောငျမွငျဖို့လမျးဆိုတာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူကွပါဘူး။ အောငျမွငျဖို့လမျးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ သခြောတာကတော့ အတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးတှဟော အောငျမွငျမှုရဲ့ အခွခေံပါပဲ။ အသဈအသဈတှကေို ကွိုးစားကွညျ့ပါ။ ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျပါ။ မေးမွနျးလလေ့ာပါ။ အိပျခြိနျမှနျပါစေ။ စဉျးစားတှေးချေါဖို့ အခြိနျသတျသတျပေးထားပါ။ အဲဒါတှကေ ဘဝအောငျမွငျဖို့အတှကျ အရေးအကွီးဆုံးပါပဲ။ တခွား သျသငျ့တဲ့ အခကျြလေးတှကေို အောငျမှာ ရေးပွထားပါတယျ။
၁. အမှိုကျ ရှငျးပါ
ရှငျးရှငျးလငျးလငျးရှိတာဟာ စိတျရှငျးစပေါတယျ။ စိတျရှငျးရငျ ပိုပွီး ကောငျးကောငျးတှေးချေါနိုငျပါတယျ။ ပစ်စညျးအသဈတဈခု ဝယျလိုကျတိုငျး အဟောငျးကို လှူပဈ ရောငျးပဈ၊ မရရငျ လှငျ့ပဈလိုကျပါ။
မိနဈ၂၀ လောကျ အခြိနျယူပွီး အစီအစဉျခလြိုကျတာဟာ ၂ နာရီစာအလုပျ သကျသာစပေါတယျ။ သငျနဲ့အဆငျပွမေယျ့ ကိုယျပိုငျအခြိနျဇယားဆှဲပါ။ ၈နာရီစာ အလုပျခြိနျအတှကျ လုပျစရာ ၈ ခု အစီအစဉျခသြငျ့ပါတယျ။ ငှရှောဖို့အတှကျ ၆ ခု ကိုယျပိုငျအခြိနျ ၂ ခု ပါပါစေ။
၃. “ဘူး” တဈလုံးဆောငျပါ
အငွငျးစကားဟာ သငျ့အတှကျ ဘဝပြျောရှငျရေးနဲ့ အလုပျအတှကျ လြှို့ဝှကျလကျနကျပါပဲ။ အားမနာတတျပါနဲ့။ အောငျမွငျတဲ့သူတှနေဲ့ အရမျးအောငျမွငျတဲ့သူတှေ ကှာခွားခကျြက ဒုတိယ အမြိုးအစားက “ဘူး” တဈလုံး ဆောငျတတျတာပါပဲ။
၄. ကြေးဇူးတငျကွောငျး ပွပါ
ဘဝမှာ အောငျမွငျတဲ့သူတှကေ ကြေးဇူးတငျတတျကွပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျကွောငျး စာတိုလေးတှေ၊ ဖုနျးဆကျပွောတာတှေ၊ အဲ့လို သေးသေးမှားမှားလေးတှကေ သငျ့ကို သာမနျလူတှထေဲကနေ ကှဲထှကျနစေနေိုငျပါတယျ။ ကုနျကစြရိတျက ဖုနျးဘလျေ နညျးနညျး၊ ပွနျရတာက အတိုငျးအဆမရှိပါ။
၅. သငျ့ဖုနျးကို အိပျရာထဖို့ နှိုးစကျအနနေဲ့ မသုံးပါနဲ့
ဖုနျးသုံးတဲ့သူ တျောတျောမြားမြားဟာ ဖုနျးကို ဘေးမှာထားပွီး အိပျတတျကွပါတယျ။ ညဘကျမှာ ဖုနျးသုံးတာဟာ အိပျပြျောဖို့ ခကျခဲစပေါတယျ။ ပွီးတော့ Facebook Noti တှေ Viber Msg tone တှကေလဲ အိပျပြျောနရောက လနျ့နိုးသှားစနေိုငျပါတယျ။ ဖုနျးကို ဝေးဝေးမှာထားပွီးတော့ နှိုးစကျနာရီ ကောငျးကောငျးတဈလုံး ဝယျထားပါ။
၆. လူတိုငျးနဲ့ သဘောမတူပါနဲ့
ဘဝမှာ ဘကျတဈခုခုကို ရှေးခယျြပါ။ လူတိုငျးနဲ့ သဘောမတူပါနဲ့။ ကိုယျ့ အတှေးအမွငျကို ကိုယျကာကှယျပါ။ အတှေးအမွငျတဈခုရှိတဲ့အတှကျ သငျ့ကိုလူတှကေ လေးစားကွပါလိမျ့မယျ။ ဘယျတော့မှ လှနေံ နှဈဖကျ မနငျးပါနဲ့။
၇. မအိပျပဲ မနပေါနဲ့
လူတျောတျောမြားမြားဟာ အိပျရေးမဝတတျကွပါဘူး။ အိပျရေးမဝရငျ ဦးနှောကျက ရာနှုနျးပွညျ့ အလုပျမလုပျပါဘူး။ ဦးနှောကျရာနှုနျးပွညျ့အလုပျမလုပျရငျ ဆုံးဖွတျခကျြခရြာမှာ ခကျခဲစခွေငျး၊ စိတျဆတျခွငျး တို့အပွငျ ကိုယျခန်ဓာနဲ့ ကနျြးမာရေးကိုပါ ထိခိုကျစတေတျပါတယျ။ အိပျခြိနျတဈခုကို သီးသနျ့သတျမှတျပွီးတော့ ညတိုငျး အိပျရေးဝအောငျ ကွိုးစားပါ။
၈. အတိတျမှာ ရပျမနပေါနဲ့
အတိတျမှာ ရပျနမေိဖို့ဆိုတာ အရမျးလှယျပါတယျ။ ဖွဈသငျ့ခဲ့တာ.. လုပျသငျ့ခဲ့တာ.. လုပျနိုငျခဲ့တာ.. တှကေို ပွနျမစဉျးစားပါနဲ့တော့။ သငျ့အတိတျကို မပွောငျးလဲနိုငျပမေယျ့ အနာဂါတျကို ပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။ အမရေိကနျသမ်မတဟောငျး သောမတျဂကျြဖာဆငျက “အနာဂါတျကို အိပျမကျရတာကို အတိတျသမိုငျးထကျ ပိုစိတျဝငျစားပါတယျ” လို့ ထုတျဖျောပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
Previous: အသက်ငယ်ငယ် နှင့် အောင်မြင်မှုရရှိစေမည့် အမူအကျင့်များ
Next: အလုပ်မှာ အချိန်ဖြုန်းမိနေပါသလား